Hlola iSanto Domingo, eDominican Republic - World Tourism Portal
Hlola iSanto Domingo, eDominican Republic
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeSanto Domingo
Bukela ividiyo mayelana neSanto Domingo
Hlola iSanto Domingo inhloko-dolobha ye i-Dominican Republic nedolobha elidala laseYurophu emazweni aseMelika. Idolobha elidala likisohlu Lwamagugu Omhlaba we-UNESCO.
ISanto Domingo inhloko-dolobha yaseDominican Republic, futhi iyaziqhenya ngokuba idolobha lokuqala laseYurophu eNew World. Isungulwe ngumfowabo kaChristopher Columbus, uBartolome Colombus e1496, yisona sakhiwo esidala kunazo zonke esihlala abantu baseYurophu emazweni aseMelika futhi sasiyisihlalo sokuqala sombuso wamakoloni waseSpain ezweni elisha. Ngalesi sizathu, idolobha laseSanto Domingo linamagugu acebile omlando namasiko okwenza noma yikuphi ukuvakasha kube yinzuzo enkulu kakhulu. Kulezi zinsuku, ihlala ingenye yedolobha elinabantu abaningi eMelika Ephakathi-I-Caribbean indawo, kanye nesikhungo esikhulu sezomnotho nezentengiso salesi sifunda.
Lo muzi uhlukaniswe izingxenye ezimbili nguMfula i-Ozama. Uhlangothi lwasentshonalanga luthuthukiswe kakhulu kwezomnotho, kanti ingxenye esempumalanga, eyaziwa nge- “Santo Domingo Este,” isalele emuva ngokomlando.
Indawo ebaluleke kakhulu yokuvakasha kulo leli dolobha yiZona Colonial or Colone Zone, osebeni olusentshonalanga lomfula futhi lubheke oLwandle lweCaribbean. Ngasentshonalanga kweZona Colonial kukhona iGazcue, enye yezindawo zakudala zakuleli dolobha, egcwele izindlu ezindala zeVictorian nemigwaqo egudle izihlahla. Isitezi samanzi sedolobha iGeorge Washington Avenue, saziwa ngokuthi “i-El Malecon,” sinqamula uLwandle lweCaribbean futhi sheha izivakashi eziningi ngenxa yamahhotela alo, amakhasino, amabhisikidi amile wesundu nezikhumbuzo. Uma uzungeza indawo yaseGazcue uzothola iPalacio Nacional (isihlalo sikahulumeni waseDominican), i-National Theatre, Iminyuziyamu ePlaza de la Cultura, kanye nePalace of Fine Arts.
Enkabeni yentshonalanga yeSanto Domingo kukhona inhliziyo yezomnotho neyentengiselwano yedolobha, endaweni eyaziwa ngokuthi yi- “Poligono Central” futhi enqunywe yi-27 de Febrero, John F. Kennedy, Winston Churchill neMaximo Gomez avenues. Le ndawo enengeniso ephezulu isalokhu ingagadli abavakashi, yize inikezela ngokudla okungcono kakhulu nokuthenga okutholakalayo edolobheni. Iningi lezindawo ezicebe kakhulu kuleli dolobha lizungeze amapaki amakhulu amakhulu aleli dolobha, iParque Mirador Sur eseNingizimu neJardin Botanico eNyakatho.
Ku-Santo Domingo yaseMpumalanga engakhuli kangako uzothola ezinye izikhumbuzo ezinkulu nezindawo zabavakashi, njengeColumbus's Lighthouse, lapho kungcwatshwa khona izidumbu zabahloli, imihume evulekile yeParque Nacional Los Tres Ojos, ne-National Aquarium.
Lokhu konke kwenza iSanto Domingo idolobha elihlala ndawonye, ​​elinomdlandla futhi eliphithizelayo elinemiphakathi ehlukene kakhulu nama-ambiances, konke kufanele ukuvakasha, futhi kunikeze okuhlangenwe nakho kwamasiko ahlukahlukene kakhulu.
ISanto Domingo ijabulela isimo sezulu esishisayo. Lesi siqhingi sithambekele ezivunguvungu ikakhulukazi ngoJuni 1 kuya kuNovemba 30, kodwa ngenhlanhla bathola izexwayiso eziningi kusengaphambili ukuze balungiselele abantu babo kanye nezivakashi nganoma yikuphi ukulimala. ISanto Domingo yidolobha elihle ukuvakasha kulo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, ngoba isimo sezulu esihle sedolobha sezulu esishisayo sihlala unyaka wonke!
ISanto Domingo iyindlunkulu yomsebenzi wezomnotho eDominican Republic. Idolobha libamba ukunakwa kwamafemu amaningi aphesheya. Iningi lalawa mafemu abenekomkhulu lawo edolobheni ngenxa yendawo yalo enhle nomnotho ochumile.
Isikhumulo sezindiza i-Las Americaas International (Itholakala: Greater Santo Domingo). Itholakala cishe imizuzu eyi-15 ukusuka endaweni yedolobha elikhulu futhi nemizuzu ezungeze i-30 ukusuka enkabeni yedolobha. Isikhumulo sezindiza sinikezela ngezinketho eziningana zokuhamba, kufaka phakathi zonke izinkampani ezinkulu zokuqasha izimoto zaseMelika.
Isikhumulo sezindiza i-La Isabela International (Itholakala: Greater Santo Domingo).
Isikhumulo sezindiza sasePunta Kana International (Itholakala: IPunta Kana / Idolobha Eliphezulu)
Isikhumulo sezindiza i-La Romana International (Itholakala: La Romana City)
Isikhumulo sezindiza i-Cibao International (Sitholakala: Santiago de los Caballeros City
Isikhumulo sezindiza i-Gregorio Luperón International Airport (Itholakala: Idolobha lasePuerto Plata)
Isikhumulo sezindiza i-El Catey International (Itholakala: Idolobha iSanchez)
Isikhumulo Sezindiza saseMaría Montez International (Itholakala: Idolobha laseBauhona)
Naphezu kokuziqhayisa ngamagugu acebile ngokwesiko, kwezokwakha nezobuciko, iSanto Domingo ayitholakalanga ngokuxhashazwa ngawo wonke amandla ayo okuvakasha. Umuhle ngokwakho ukuthola leli dolobha elihehayo. Sebenzisa isikhathi sakho lapho.
Indawo YamaKoloni. ISanto Domingo kwakuyindawo yokuqala yokuhlala yaseYurophu yaseNew World. UChristopher Columbus uhambe kule migwaqo! Bheka izibonelo eziningi ze-15th ne-16th yezakhiwo zakudala e-Colonia Zone. Ungaphuthelwa i-Ozama Fort, i-Alcazar de Colon neCathedral, konke okwakhiwe ngesikhathi sokuphila kukaColumbus. Ungahlola amasonto amahle nama-convoc, anjenge-Iglesia Regina Angelorum neConvento de los Dominicos. Ungaphuthelwa yiPanteon Nacional, lapho kungcwatshwa khona amaqhawe ezwe lonke, endaweni eyiCalle Las Dam, umgwaqo wokuqala waseNew World (European)! Futhi, hamba uye ku-Calle del Conde, umgwaqo odala kakhulu wabantu abahamba ngezinyawo owawuyindawo yokuhweba yedolobha. Lo mgwaqo uholela ePuerta de la Uhuruencia, lapho iDominican Republic imemezele khona inkululeko yayo Haiti, kanye neParque Uhuruencia, lapho kugcinwa khona izidumbu zobaba abasungula izwe. NgeSonto kusihlwa, hlola iRuinas de i-San Francisco kuma-band bukhoma adlala iMerengue, iBachata, iSalsa neNdodana, embukisweni omuhle wamasonto onke lapho bobabili bendawo nezivakashi bedansa, baphuze futhi bezijabulisa. Lokhu kungaba yinto engalibaleki! Bheka futhi umgwaqo weLa Atarazana ngemuva kokumnyama ngezinhlobo zokudlela ezinhle zangaphandle ezingafani ngokubuka okumangazayo kwendawo ye-Alcazar ne-bay. Omunye wabasebenzi abanjena, uPat E Palo, usebenze ngokungaphazamiseki kusukela nge1505. Bheka indlu lapho kwakuhlala khona uPonce DeLeon ngaphambi kokuthi aqale ukufuna kwakhe umthombo wobusha bese egcina ethola uFlorida.
Malecon (George Washington Avenue). Leli boulevard elingasemanzini liyikhaya lezindawo eziningi ezinkulu zamahhotela / amakhasino kanye nezindawo eziningi zokudlela ezincane, amaklabhu namakhekhe. Iya lapho kubukwe abantu, uthathe uhambo lokuhamba ngenqola yothando noma ube nje namabhiya ambalwa. Iphatha imikhosi eminingi namakhonsathi unyaka wonke. Ngokufana neMalecon uzothola i-Avenida Uhuruencia, umuthi onophahla lomgwaqo ogcwele izitolo, umbhede nezindawo zokuphumula kanye nezindawo zokudlela ezingabizi ngokuhlangana okuhle kwezindawo nezivakashi. Ngemininingwane yokudlela eyingqayizivele hlola i-Adrian Tr tropical, indawo yokudlela yendabuko yaseDominican eyakhelwe phezu kwamanzi, noma iSan Gil, indawo yokudlela ehlelekile ebamba amanxiwa enqaba yamakoloni. Isikhungo saseMalecon, esisekupheleni kweMalecon, siyindawo entsha futhi okuhlala kuyo indawo ethengisa izinto ezinkulu / ehhotela / i-condo enesakhiwo saseBatero ngaphambili okubikwa ukuthi kudle izigidi ezingama-US $ 1.
I-Plaza de la Cultura. Le nkinga emangalisayo iyikhaya leNational Theatre kanye neminyuziyamu emihlanu, isukela endaweni esetshenzisiwe neyejwayelekile, kuya ekrisimusi, iMuseum yesimanje yesimanje Art Art, enkulu kunazo zonke eCaribbean nasekhaya ukuboniswa ngabadwebi abavela Jamaica, Bahamas, E-Puerto Rico, futhi, i i-Dominican Republic. Uma ufuna ingadi enhle enhle ukufunda noma ukukhuluma le yindawo yakho.
I-Eco-Tourism. Thola indlela yakho eya eParque Mirador Sur, ipaki elihlaba umxhwele elibheke ugu. Kuvalwa ngezimoto phakathi nezinsuku phakathi kwe-5 ne-8 am bese ntambama, kanye nangamaSonto, okwenza ikwazi ukugcwala imindeni edlala nezingane zayo futhi ivivinya umzimba. Ukuqasha ibhayisekili onakho. Futhi, ungavakashela iJardin Botanico, ipaki elikhulu, elihle nelinenhle eliseduzane nenye yezindawo ezikhethekile zaseSanto Domingo. Lapho ungathola imvelo ehlukile kusuka ehlathini lemvula kuya engadini yaseJapan!
I-Eastern Santo Domingo. Kubhekwe njengeSanto Domingo Oriental, lo masipala ohlukene awubungani kakhulu nabavakashi. Ngenhlanhla, iningi lokuhehayo kwalo kusondele kakhulu kwiKoloni Zone futhi kulula ukuyithola. Bheka iLos Tres Ojos, noma ama-Eyes amathathu, uchungechunge lwamachibi avulela namachibi angaphansi komhlaba wonke umndeni uwuthola. (Ngale ndawo le ngxenye yeSanto Domingo yiyona ehlupheke kakhulu futhi ingaba yingozi !!!!). Yibhekise eFarao Colon, indlu ekhanyayo enkulu nesikhumbuzo kuChristopher Columbus ongagcini ngokugcina izinsalela zakhe kepha akuphindwe kabili njengomnyuziyamu. Bheka iSanto Domingo Aquarium, isibukiso esincane kodwa esimangazayo sempilo yasendaweni yasemanzini. Uma ufuna ukuyothenga okuthile, ungaya eMegacentro, eSanto Domingo enxanxathela enkulu yezitolo. Kukhulu!
Upscale Santo Domingo. Uma ufuna ukubona i-cosmopolitan, uhlangothi olusezingeni eliphezulu lweSanto Domingo, yibhekise ezindaweni ezingomakhelwane zePistrong neNaco. Izitebele ezinjengeGustavo Mejía Ricart kanye nezindlela ezinkulu ezifana no-Abraham Lincoln noWinston Churchill zifakwe ezindlini zokugcina izindawo ezinkulu, izindawo zokuthenga, amathishi okudlela abizayo kanye nezindawo zokudla ezinikela ngezinhlobonhlobo zezindawo zokudla zomhlaba wonke futhi cishe nayo yonke imali angayithenga, ezitolo ze-cigar ziye eFerrari nase-900 ukuthengisa. IJW Marriott Hotel isanda kuvula kule ndawo, okungenzeka ukuthi ilethe ezokuvakasha eziningi kulokho okuyilona “dolobha” laseSanto Domingo. Ungaphuthelwa iBlue Mall, isikhungo sokuthenga / i-Ultra-yesimanje yezitolo lapho uzothola khona konke kusuka eHard Rock Cafe's kuya eSophias Bar naseGrand kanye nezitolo ezibiza kakhulu edolobheni kusuka eLouis Vuitton, Ferragamo, Cartier, Tous & L 'I-Occitane kuma-casual amaningi afana neZara ne-Adidas. Ngokukhetha (kancane) okungabizi kakhulu, zama i-Agora Mall eduzane. Okunye futhi okusanda kuvulwa yiNovocentro evule embhoshongweni wengilazi okwakuyakuba yibhange, kodwa yaphenduka indawo yezitolo i-2 enezikhungo ze-Fine Arts Cinema kanye nezinye izindawo zokudlela eziphezulu kanye nama-gelaterias. Ngaphezu kwalokho ungathola iBella Vista Mall ne-Sambil, amanye amakhona amakhulu amakhulu wokuthenga eSanto Domingo. Uma ufuna amanye amaplaza avulekile womoya afakwe ezindlini zokulala ezincane, kufanele uhlole iPlaza Andalucia. Ukuze u-Bowling, ungaya kwiPlaza Bolera, esanda kuthola ubuso. Uma ukule ndawo ekuseni kakhulu, kufanele uhlole amathofi athambile anjengeLa Cuchara de Madera, lapho ungathokozela khona izintwala ezinjenge-dulce de leche “Piramides”, ne-SUD & La posta yokudlela futhi nakanjani kuma-nightclub asezingeni eliphezulu nemigoqo.
I-Alcázar de Colón - Vakashela lesi sigodi esimangalisayo, esakhiwe nge-1510 nokugcina isikhathi sempahla nezinye izinto eziphethwe yi-Governor Diego Colón, izibulo likaChristopher Columbus.
Naval Museum of the Atarazanas Akhiwe ngaphesheya kweplaza kusuka e-Alcazar de Colon eCalle Atarazana, umgwaqo wakudala kakhulu eWestern Hemisphere.
Imyuziyamu yeCasas Reales Enye imnyuziyamu enkulu enamaqoqo abonisa impilo ngekhulu le-16th Santo Domingo. Itholakala eCalle Las Dam, ibanga lokuhamba ukusuka e-Alcazar de Colon naseMnyuziyamu wase Naval.
Umhlaba we-Ambar Museum Iqoqo elihle kakhulu lamatshe e-amber
Imyuziyamu yaseDuarte Iqoqo lezinto zakudala kanye nemibhalo ephathelene nobaba owasungula iDominican Republic, uJuan Pablo Duarte. Itholakala eCalle Isabel La Catolica, amabhlogo ambalwa asentshonalanga yeminyuziyamu engenhla.
Imyuziyamu emnandi yaseMuseo del Ron Dominicano ethula umlando nokuvela kokukhiqiza i-rum eDominican Republic. Emahoreni ngemuva kuphenduka ibha (funda ngezansi). 
Imyuziyamu Yomlando Wezemvelo
Imyuziyamu yeDominican Man
Imnyuziyamu yobuciko besimanje
Imnyuziyamu kaZwelonke Yomlando kanye neJografi
Kunamapaki amaningi azungeze idolobha laseSanto Domingo. Enye yamapaki athandwa kakhulu ibizwa ngeLos Miradores, etholakala ezingxenyeni ezahlukahlukene zedolobha. Lawa mapaki athokomele kakhulu epikinikini, ukugibela ibhayisekili, ukugijimela okusheshayo, noma ukuhamba ibanga elide ukuze ujabulele imvelo futhi uphumule nabangane. Mikhulu impela futhi ingaba yingozi kancane uma uzulazula phakathi nobusuku, ngoba ayinazo izibani zomgwaqo. Yize iSanto Domingo izungezwe amapaki amahle ayinayo indawo yokuzijabulisa etholakala emphakathini. Amanye amapaki atholakala:
IMirador Norte Park, isenyakatho nedolobha, eduze neVilla Mella
IMirador Sur Park, esendaweni eseningizimu-ntshonalanga yedolobha
I-Uhuruencia Park, etholakala eZona Colonial
IColon Park, etholakala eZona Colonial
ILas Praderas Metropolitan Park
I-Malecón, ipaki elisogwini elisedolobheni
URafael Ma. I-Moscoso National Botanical Garden
I-Dominican Republic National Zoo
I-Parque Nuñez de Caceres
Imikhosi emibili ephezulu yonyaka yenzeka eSanto Domingo. Umkhosi waminyaka yonke weMerengue ehlobo kanye neCarnival entwasahlobo. Ngamunye walokhu ubanjelwe emgwaqweni omkhulu wolwandle wedolobha, i-El Malecon, kepha uthambekele ekuchithekeni kwama-ballrooms amahhotela, emabhishi, emaphaketheni nasezindaweni zokupaka izimoto. Le yindlela enhle yokuziqhamukela esikweni laseDominican, futhi uhlangane nabantu abasha abathakazelayo abavela edolobheni. Umkhosi weMerengue wenzeka phakathi kukaJulayi 26th futhi 31st . Umkhosi ungukugubha komdanso ophambili waseDominican Republic, i-merengue. Zimema amaqembu aphezulu ama-merengue ukuthi azokwenza amakhonsathi mahhala esixukwini. Umkhosi uqala nge-parade, kodwa ngokuhamba kwesikhathi iba yikhonsathi. Kunemibukiso yezobuciko, Fairs yokudla, kanye imidlalo eyenzeka ngasikhathi sinye. Umsebenzi oyinhloko owenziwa phakathi nomkhosi ukudansa i-merengue, ngakho-ke zilungiselele ukuqhutshwa ungalawulwa lapho unquma ukudansa nowasendaweni. Omunye umcimbi omangalisayo yi-The Carnival, owenzeka phakathi nenyanga yonke kaFebhuwari, kepha ufinyelela umvuthwandaba wawo ngoFebhuwari 27, usuku lokuzimela lwaseDominican. I-Carnival yenzeka nase-El Malecon, lapho imaski, efanekisela imimoya yokomoya; imvunulo ebanzi, nemidanso ethokozisayo ihamba imigwaqo ngenkathi ijabulisa futhi ngesinye isikhathi isabisa isixuku.
IColonial Zone inikezela ngamathuba amaningi okuthenga, ikakhulukazi uma ufuna i-Ambar neLarimar, amatshe endabuko aseDR. Ungakhohlwa ukuguquguquka, ngoba bonke abanikazi bezitolo balungisa amanani abo ngale njongo. Uzothola nethani lobuciko beHaiti elithengiswa yonke indawo ngamanani amakhulu. Uma leyo nto yakho, kuhle, vele ukhumbule akuyona iDominican. Indawo eyindilinga enkulu endaweni eyiKoloni yi-El Conde, indawo yokuhamba yabahamba ngezinyawo efakwe kuzo zonke izinhlobo zezitolo nezindawo zokudlela ezihlosiwe ikakhulu ezindaweni. Zijabulise ukuyothenga nabantu obukele lapha.
Uma uzizwa unamandla, cela ikhebula likuyise eMercado Modelo eduzane. Le labyrinth yangaphakathi yezitolo ingaba nzima kumvakashi omusha kepha, ungakhathazeki, iphephile. Bese futhi, ungazizwa uphephe ngokucela umshayeli we-cab ukuthi akuphephe ngokusebenzisa amandla ezitolo nama-kiosks anikeza zonke izinhlobo ezingacabangi zesikhumbuzo, ubucwebe, itshe, ubuciko, njll.
Uma ufuna ukuzwa ngasesitolo saseMelika kunezinketho eziningi kepha nazi ezine ezaziwa kakhulu: i-Agora Mall, Blue Mall, Galerias 360 neSambil, kulabo abathanda ukungena eSanto Domingo Oriental, MegaCentro. Khumbula: akukho kuhudula ezitolo ezinkulu. Ngenkathi iMegaCentro ikude kakhulu kunabanye, iyindawo yesibili ngobukhulu emall I-Caribbean (emva kwePlaza Las Americaas in E-Puerto Rico) futhi indawo ozoya kuyo uqobo. Le ndawo yi-HUGE!
I-Santo Domingo inikeza izinhlobo zokudla ezivela emhlabeni wonke kusuka eChina, e-Italy naseMedithera kuya Brazilian. Ungathola futhi ama-franchise asheshayo wokudla okufana neMcDonalds, iBurger King, iPizza Hut, iWendy's, iTaco Bell, phakathi kwabanye.
Esikhathini esithile emlandweni amaDominicans ayekuthanda kakhulu inkukhu ethosiwe nokudla kwamaChinese, ahlanganisa izindlela zombili zokudla ezinamaphakethe okudla okusheshayo aziwa ngokuthi yi- "pica polos". Lokhu kuvame ukuhlangana ngokuphuma okuqhutshwa ngabokufika besizukulwane sokuqala noma sesibili, beqongelela izingxenye zerayisi ethosiwe, izingcezu zezinkukhu nezinambitha (namafutha) inkukhu ethosiwe, kanye nezinhlobonhlobo zokudla kokududuzelwa kwesiChinese. Akubizi kakhulu. Vakashela iSanto Domingo's China Town, eduzane neMercado Modelo futhi engekude neColoni Zone (iDuarte Avenue), indawo ematasa kakhulu lapho abantu abasebenza khona benza okuningi bethenga. Uma uzizwa unamandla okwazi ukungena kule ngxenye evame ukuba nesiphithiphithi kodwa enhle kakhulu yedolobha kungaba yinto ongayikhumbula. Hlala ukhumbula, amaphokhethi athanda imigwaqo egcwele abantu, ubheke impahla yakho eduze.
I-Santo Domingo inezinhlobonhlobo ezimangalisayo zokuphila ebusuku. Ngeshwa, imigoqo eminingi namakilabhu kufanele kuvalwe e-1AM kusuka ngeSonto kuze kube uLwesine nase-2AM ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Lesi isimiso esinqunyelwe njengoba i-2006 ihlose ukunciphisa ubugebengu obukhulayo edolobheni. Ngakho-ke, akujwayelekile ukuthi abantu baqale ukuhlanganyela e-8PM ngezimpelasonto. Ngokujabulisayo, lo mthetho umisiwe ngamaholide nakumaviki amabili okugcina kaDisemba ukuze kube nguKhisimusi. Imvamisa amaklabhu akhiwe ngaphakathi kwamahhotela amakhulu awasuswa kulo mthetho, noma evame ukungabi mnandi kakhulu.
Noma yini oyenzayo, ungashiyi iSanto Domingo ngaphandle kokuvakashela eLa Guacara Taina, okuwukuphela kwenkundla yobusuku emhlabeni ngaphakathi komhume omkhulu wemvelo. Yehla ngamakhulu ayikhulu ezweni eliconsayo lamalambu nomsindo. Kufanele ubone le ndawo ukuze uyikholelwe. Kutholwe (ngaphansi) kwepaki iMirador Sur eshiwo ngenhla.